Kay: yaan la carqaladeyn askarta nabad ilaalinta | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Kay: yaan la carqaladeyn askarta nabad ilaalinta
Kay: yaan la carqaladeyn askarta nabad ilaalinta
War qoraal ahaa oo uu soo saaray madaxa xafiiska Qaramadda Midoobay ugu qeybsan kaalmaynta Soomaaliya, Nicholas Kay ayuu si xooggan ugu cambaareeyay shaqaaqo uu sheegay in lagula kacay ciidamadda Jabuuti uga midka ah hawlgalka AMISOM, isaga oo sidoo kalena ku baaqay in xal rasmi ah loo helo xiisadda weli ka taagan gobolkaasi Hiiraan.
“Waxaan aad uga xumahay in la weeraro ciidamadda nabad ilaalinta oo doonayay inay kala dhex gelaan dad ku dagaallamay deegaanka Deefow si ay uga qeybqaataan hawlaha dib u heshiisiinta ee loo fidinayo dadkaasi,” ayuu bayaankiisa ku yiri Mr. Kay.
Dhinaca kale, danjire Kay ayaa ku booriyay odayaasha dhaqanka reer Hiiraan inay si waddajir ah u xaliyaan kala aragti duwanaashahooda u dhexeeya, una maraan hab nabadgelyo si buu yiri dib loogu soo celiyo ammaanka guud ee gobolkaasi.
Mr. Kay wuxuu kaloo ka tacsiyeeyay dhammaan khasaarihii ka dhashay shaqaaqadaasi dhacday.
Previous articleLondon: shirweyne maalgashi oo loo furay Afrika
Next articleDhadhaab oo qaxooti dib uga soo laabanayaan!